YEYINTNGE(ကနဒေါ): Friday, May 10
11-5-2013- UN-Archived Document
၁၉၉၈ ဂျွန်လ ၄ရက်နေ့မှာ ရွှေတြိဂံ စစ်တိုင်းမှူး ဗိုဟ်မှူးကြီး သိန်းစိန်ဘဝ (ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း နအဖ ဥက္ကဋ္ဌ) တုန်းက ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ခန်းတောင်းမြို့နယ် ဒေသ ၂ရှိ ကင်းကရွာသားများထံမှ လယ်မြေ ၁၃ကွက်ကို စစ်စခန်းတိုးချဲ့ဖို့ သိမ်းယူရန် ဗိုဟ်မှူးလှထွေးကို ခိုင်းစေခဲ့ကြောင်း၊ ထို မြေသိမ်းခံရတဲ့ ရွာသားများကို အိမ်တစ်လုံးဆောက်သာရုံ မြေကွက်အချို့ပြန်ပေးခဲ့ပေမယ့် မြေတစ်ကွက်ကို ငွေတစ်သောင်း ထိုရွာသားများ ပေးဝယ်ရကြောင်း၊ မြေတိုင်းခ တစ်ထောင်လဲ တောင်းယူခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုးဝါးဆုံးမှာ ထိုမြေသိမ်းခံလယ်သမားများအနေနဲ့ အသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ သူတို့မြေပေါ်မှာ စစ်တပ်အတွက် သီးနှံပင်များစိုက်ပျိုးပေးဖို့ အတင်းအဓ္ဓမ ခိုင်းစေခံခဲ့ကြရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မှတ်တမ်းအချို့ ယနေ့ည ၁၂နာရီခန့်မှာ ပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (11-5-2013)
"On4June 1998, Golden Triangle Military Commander Major General Thein Sein (Chairman of the Eastern Shan State Peace and Development Council) ordered Major Hla Htwe to confiscate 13 plots of land and rice fields owned by villagers of King-Ka in zone2of Kaeng-Tung, for the purpose of expanding the SPDC military base there. The military would provide each household withaplot of land atadifferent place big enough to buildasmall house. But the villagers would have to buy them at the price of K 10,000 each plus an extra K 1,000 foraland survey fee. Furthermore, the same villagers were forced to grow crops for the military on the land that had been forcibly taken from them."
BY YeYint Nge ... 5/10/20132comment
၂၀၁၅ မတိုင်ခင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတိုင်ခင် အမြန်ဆုံးပြုပြင်စေလိုကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီနေ့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ မီကာဆာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ၃ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့တာပါ။
"ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ၂၀၁၅ မတိုင်မီကို ပြုပြင်စေချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးပြုပြင်လို့ရှိရင် အကောင်းဆုံးပဲ၊ ဒီလိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်လိုက်မှ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲရောက်တဲ့အခါကျရင် ပြည်သူအများကလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ရှိမယ်၊ ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိမယ်"
ဒါ့ပြင်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ပိုမိုရရှိလာမှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လည်း နီးစပ်လာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မယ်လို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ လွှတ်တော်တွင်းက တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Photo: ၂၀၁၅ မတိုင်ခင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတိုင်ခင် အမြန်ဆုံးပြုပြင်စေလိုကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီနေ့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ မီကာဆာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ၃ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့တာပါ။ "ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ၂၀၁၅ မတိုင်မီကို ပြုပြင်စေချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးပြုပြင်လို့ရှိရင် အကောင်းဆုံးပဲ၊ ဒီလိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်လိုက်မှ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲရောက်တဲ့အခါကျရင် ပြည်သူအများကလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ရှိမယ်၊ ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိမယ်" ဒါ့ပြင်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ပိုမိုရရှိလာမှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လည်း နီးစပ်လာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မယ်လို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ လွှတ်တော်တွင်းက တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 5/10/20130comment
တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားထံ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများ မေတ္တာရပ်ခံ
နိုဗယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားထံ ပေးပို့ထားသော မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ မေတ္တာရပ်ခံ လျှောက်ထားလွှာ = = = (ဘာသာပြန်)
နေ့စွဲ – မေလ ၉ ရက် ၂၀၁၃
Dear His Holiness Dalai Lama
တိဗက်မြေတွင် တရားမျှတခြင်း ကင်းမဲ့မှုကို ခုခံတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့် တိဗက်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အတူတကွ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်လျှက်ရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျင့်သုံးဆောက်တည်နေကြသော မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များအား မှားယွင်းစွာ ရှုံ့ချထားသည့် အရှင်ဘုရား၏ မကြာမြင့်မီက မှတ်ချက်စကား များကို ဖတ်ရှုရသည့်အတွက် တပည့်တော်တို့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းများသည် များစွာမှပင် ၀မ်းနည်းကြရပါသည် ဘုရား။
ရည်ညွှန်းချက် – ဓမ္မသာလ၊ အိပ်ခ်ျပီ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၁၃ ၊မေရီလန်း တက္ကသိုလ်၌ ပရိသတ်တစ်စု အား ပြောကြားသည့် မှတ်ချက်စကား၊ ၇ မေ ၂၀၁၃။
Reference: Dharamsala, HP, India, 22 April 2013, comment to an audience at the University of Maryland,7May 2013.
တပည့်တော်တို့ ထင်မှတ်သည်မှာ အရှင်ဘုရားသည် လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း အချို့ နှင့် တစ်ဘက် သတ် ရေးသားထုတ်ပြန်ထားသည့် အစွန်းရောက်များနှင့် အခွင့်အရေးသမားများ၏ လှည့်ဖြားလိမ်ညာ ထားသော ၀ါဒဖြန့်မှုများ အပေါ်တွင် အခြေပြုထားသည့် သတင်းမီဒီယာ အစီရင်ခံချက်များက လမ်းလွှဲလိုက်အောင် ပြုခြင်းကို ခံရတော်မူလေသည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။
အရှင်ဘုရားသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ မေတ္တာထားခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားက တပည့်တော်တို့အား သွန်သင်ဆုံးမတော်သော တရားတော်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြတော်မူရာတွင် လုံးဝဥဿုံ မှန်ကန်ပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့သည် လူမျိုး ဘာသာ မရွေး လူသားများ အဖြစ် မည်သည့် အကြမ်းဖက်မှုကို မဆို ပြစ်တင်ဝေဘန်ရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် ပဋိပက္ခအတွက် မဆို ငြိမ်းချမ်းသော ဖြေရှင်းချက် ရရှိရေးကို အားပေးလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။
You were absolutely correct in mentioning about what Buddha taught us about forgiveness, tolerance, compassion.We, as human beings regardless of race & religion, must denounce any kinds of violence, and promote peaceful solution for any conflicts.
မြန်မာနိုင်ငံသည် (၁၃၅)မျိုးသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနွယ် အုပ်စုများဖြင့် အာရှတိုက်တွင် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု အများဆုံး နေထိုင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံများ အနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ သမိုင်းကြောင်း အရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကွဲပြားခြားနားသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အုပ်စုများ အကြား အပြန်အလှန်လေးစား မှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်သည့် စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သော နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ သက်တမ်း ၂၀၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်သော ဆူးလေစေတီတော်၊ သက်တမ်း ရာကျော်ရှိသော ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ဗလီဝတ်ကျောင်းတို့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ နှင့်အတူ (မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး မြို့တော်) ရန်ကုန်မြို့ထဲ အရပ်၏ ဗဟိုတွင် ဘေးချင်းယှဉ်လျှက် တည်ရှိနေပါသည် ဘုရား။ ဟိန္ဒူဘာသာရေး ဘုရားကျောင်း တစ်ခုသည်လည်း ရန်ကုန်မြို့ထဲ အရပ်၌ ထို သမိုင်းဝင် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများအနီးတွင် ထီးထီးမားမား ရှိနေပါသည် ဘုရား။
Burma isamost diverse multi ethnic country in Asia with 135 indigenous ethnic groups. Historically Burma isatolerant country with different faith groups live peacefully side by side with mutual respect. Over 2,000 years old historic Sule Pagoda, over century old Christian Church& Mosque are existing side by side in middle of downtown Rangoon (Burma’s largest city) alongside with Rangoon City Hall. A Hindu Temple is also standing near these historic religious buildings in downtown Rangoon.
မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှု ကင်းမဲ့လှသည့် လူ့အသိုက်အ၀န်းတို့အကြား အကြမ်းဖက်မှုကို (ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပ မှ) ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရန်သူများ၊ အခွင့်အရေးသမားများနှင့် အစွန်းရောက်သမားများက သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့သည် အကြမ်းဖက်မှု ပုံစံပေါင်းစုံကို ပြစ်တင်ရှုံချပြီး အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု နှင့် ငြိမ်းချမ်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ရေးကို ထောက်ခံ အားပေးကြပါသည် ဘုရား။
Recent senseless communal violence in Burma was incited by the enemies of democratic reform process, opportunists and extremists (domestic and abroad). We denounce all kinds of violence and encourage building the mutual trust and peaceful society.
မူစလင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အသိုက်အ၀န်း နှစ်ခုလုံးသည် ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှု ကင်းမဲ့လှသော အကြမ်းဖက်မှု အတွင်း၌ သေကြေဒဏ်ရာ ရရှိမှုများနှင့် ဥစ္စာပစ္စည်း ပျက်စီးမှုများကို ခံစားခဲ့ရသည် ဘုရား။
Both Muslims and Buddhists communities suffered casualties and property damages during senseless violence.
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလီ မူစလင် အမျိုးသား တစ်စုက ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းကလေး တစ်ဦးအား အုပ်စုလိုက် မတရား သားမယားပြုကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု စတင်ခဲ့ပါသည် ဘုရား။ (လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများ၊ ရှေ့နေများ၊ သမိုင်းပညာရှင်များနှင့် အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အပါအ၀င် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့်) လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က စုစုပေါင်း (၃၄၇)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး (၄၁၁)ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း နှစ်ဖက်စလုံးမှ သတင်းပို့သည့်အတိုင်း တင်ပြအစီရင်ခံခဲ့ပါသည် ဘုရား။ သေကြေဒဏ်ရာ ရရှိသူများအနက် ၆၀%မှာ မူစလင်များဖြစ်ပြီး ၄၀%မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ (သေကြေဒဏ်ရာရရှိသူများ အချိုးအစားနှင့် အလားတူစွာ) အိမ်ပေါင်း ၇၇၀၀ ကျော် ပျက်စီးခဲ့ရပါသည် ဘုရား။ ထို့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂၄)ကျောင်းနှင့် ဗလီ (၃၂)လုံးတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် လူအုပ်များက ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါသည် ဘုရား။
Last year, violence in Western Burma started withaBuddhist girl was gang raped& killed byagroup of Bengali Muslim men.The Independent Investigation Commission (consists of human right activists, lawyers, historians and religious leaders including Islam, Christian, Hindu and Buddhist) reported that total 347 were killed and 411 were injured as reported by both sides. 60% of causalities were Muslims and 40% were Buddhists. Over 7,700 houses were destroyed (similar ratio as causalities). Furthermore, 24 Buddhist Monasteries and 32 Mosques were destroyed by mobs in Western Burma.
ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ ဆိုင်ရှင်နှင့် ရွှေလာရောင်းသူတို့အကြား အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပွားပြီး မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဇနီးမောင်နှံကို ဘင်္ဂလီလူမျိုး မူစလင် ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့် ဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့က ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားလာသော မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိတ္ထိလာမြို့မှ နောက်ဆုံး အကြမ်းဖက်မှု ကို နောက်ပိုင်းတွင် ဗလီတစ်ခုအတွင်း၌ မူစလင်လူအုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော် တစ်ပါးအား ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းက အရှိန်မြင့်တက်လာအောင် ဖြစ်စေခဲ့ပါသည် ဘုရား။
Latest violence in Central Burma town of Meikthila started with an argument at Gold Shop owner & seller and physical assault to Burmese Buddhist couple by Bengali Muslim owners & staff; later fuelled byabrutal killing ofaBuddhist Monk by Muslim mob insideamosque.
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းမှ အကြမ်းဖက်မှုများတွင် အသက်ဘေး ဒုက္ခခံစားရသူများ အထဲတွင် ပါဝင်နေသော်လည်း မူစလင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လူ့အသိုက်အ၀န်းတို့အကြား အကြမ်းဖက်မှုအတွင်းတွင် ထိခိုက်ရမှု မရှိသည်ကို သတိပြုတော်မူပါ ဘုရား။ တပည့်တော်သည် အရှင်ဘုရား လေ့လာကြည့်နိုင်ရန် နှင့် စဉ်းစားတော်မူနိုင်ရန် အတွက် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပျက်မှုများမှ ဓာတ်ပုံအချို့ကို ပို့ပေးလိုက်ပါသည် ဘုရား။
Please note that although Buddhist monks were among victims of the violence in central & western Burma, none of Muslim religious leaders were hurt during communal violence. I am forwardingafew photos from recent incidents for your info and consideration.
စင်စစ်တွင် မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဘုန်းကြီးဟု ခေါ်ဆိုခြင်းခံနေရသော ဦးဝီရသူ အပါအ၀င် ဦးဆောင် ဦးရွက် ပြုသည့် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များနှင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဒေသခံများသည် မူစလင်များကို ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပြီး လက်နက်ကိုင် လူအုပ်များအတွင်း ပိတ်မိနေသော မူစလင် ရာပေါင်းများစွာအား ကယ်ထုတ်ခြင်းကိုပင် ပြုခဲ့ကြပါသည်ဘုရား။ သူတို့သည် မူစလင်များကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ကယ်ဆယ် ခေါ်ဆောင်လာကြပြီးလျှင် ယနေ့တိုင်အောင် အစာရေစာ ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလျှက် ရှိပါသည်ဘုရား။ အချို့သော မူစလင်များကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၌ ခိုလှုံခွင့်ကိုပင် ပေးထားပါသည်ဘုရား။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များသည် (ရန်ကုန်မြို့အနီးရှိ) ဥက္ကံမြို့တွင် နောက်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာသည့် မူစလင် ဘေးဒုက္ခခံစားရသူများကို အစားအစာနှင့် အခြား အထောက်အကူများ ပေးလျှက်ရှိပြီး အချို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် ခိုလှုံခွင့်ပေးလျှက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များက ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေကြပါသည် ဘုရား။
In fact, leading Burmese Buddhist monks including so called anti-Muslim monk U Withura and local Burmese Buddhist residents protected Muslims, they even rescued several hundred Muslims trapped by armed mobs. They brought rescued Muslims to safety and providing the food & water until today. Some Muslims were even provided shelters at the Buddhist Monasteries. Buddhist Monks are providing food and other assistance to latest Muslim victims in Okkan (near Rangoon); some were sheltered inaBuddhist monastery and protected by Buddhist monks.
တိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင် နေထိုင်လျှက်ရှိနေကြရာ အများအပြားမှာ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစွာဖြင့် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဇာတိမြေတွင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂလီလူမျိုး မူစလင်များကြောင့် (တိဗက်မြေတွင် တိဗက်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် တရုတ် ကွန်မြူနစ်များ ကဲ့သို့ အလားတူ အနေအထား မျိုးဖြင့်) ဘေးဒုက္ခ ကြုံတွေ့ ခံစားရသူများ ဖြစ်လျှက် ရှိနေကြပါသည် ဘုရား။ ယခုအခါတွင် ရိုဟင်ဂျာများဟု ဆိုကြသော ဘင်္ဂလီ မူစလင်များသည် (ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် နယ်ချင်းစပ်နေသည့်) မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း မြို့နယ်များတွင် လူဦးရေ၏ ၉၅% ရှိနေပြီး မူရင်းဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှာ ယခုအခါ စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၅%ထက် နည်းပါးလျှက် ရှိနေပါသည် ဘုရား။
Indigenous Buddhists ethnic people are living in the Western Burma for thousands of years, unfortunately many were victims at their own home land by invading Bengali Muslims (similar to Tibetan Buddhists and Chinese Communists in Tibet land). Now, Bengali Muslims so called Rohingya represents 95% of the population in Western Burma townships (border with Bangladesh); native Buddhists are now less than 5% of the total population.
တပည့်တော်တို့သည် အရှင်ဘုရား၏ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များအား ဆန့်ကျင်သော မှတ်ချက် စကားများသည် မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ မျှတမှုကင်းမဲ့ကာ အကြောင်းယုတ္တိမခိုင်မာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့သည် ဘုန်းတော်ကြီးမားတော်မူသော အရှင်ဘုရား ကိုယ်တိုင်ထံမှ ထိုသို့သော မှန်ကန်မှု မရှိသည့် သတင်းများနှင့် မှတ်ချက်စကားများ ထွက်လာသည်ကို ဖတ်ရှုရခြင်းကြောင့် အလွန်အမင်း ၀မ်းနည်း နာကြင်ရပါသည် ဘုရား။
We found that your comments against Burmese Buddhist Monks are incorrect, unfair and unjust. We are very sad and painful to read those incorrect news and comments especially from the His Holiness.
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များအား ရှုံချပြစ်တင်ထားသည့် အရှင်ဘုရား၏ မှတ်ချက်စကားများ ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတော် မူပေးပါရန် တပည့်တော်တို့က တလေးတစား မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ဘုရား။
We respectfully would like to request you to withdraw your comments on denouncing the Burmese Buddhist Monks.
အရှင်ဘုရား အနေဖြင့် ထပ်လောင်းသိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များ ရှိပါက တပည့်တော်ထံသို့ အချိန်အခါမရွေး ဆက်သွယ်တော်မူပါဘုရား။
ဥက္ကဌဆရာတော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ ရဟန်းတော်များ အစည်းအရုံး (ကနေဒါနိုင်ငံ)
နယူးယောက်မြို့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ ရဟန်းတော်များ အစည်းအရုံး ဌာနချုပ်၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌဟောင်း
Ven. Ashin Kawwida
President, International Burmese Monks Organization (Canada), Past Vice President of the International Burmese Monks Organization head quarter in New York
From : ..democracyforburma
BY YeYint Nge ... 5/10/2013 1 comment
စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးအား ဦးဇော်ဝင်းရှိန်၏ ကုမ္ပဏီတို့က လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိ
စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးအား ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီ၊ စစ်သမိုင်းပြတိုက်အား ၀ိတိုရိယဆေးရုံကို အဓိကပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဇော်ဝင်းရှိန်၏ ကုမ္ပဏီတို့က လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိ
Friday, 10 May 2013 00:33
စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးအား ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီမှ စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၇၀၀၀ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်သွားရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သို့ တင်ပြထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စစ်ထောက်ချုပ်ရုံး ဧရိယာ အတွင်းအပိုင်းလိုက်ခွဲ၍ တင်ဒါခေါ်ရာတွင် ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီ အပြင် ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီမှလည်း မော်တော်ယာဉ်ရုံးဝန်း နေရာအား လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။ ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီသည် ယခုအစိုးရသစ် လက်ထက်အတွင်း လှည်းတန်းခုံးကျော် စီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းများအပြင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အချက်အခြာကျ နေရာများရှိ မြေကွက်အများအပြား ရရှိကာ စီးပွားဖြစ် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်များ ရရှိထားသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံး နေရာအား လုပ်ကိုင်ခွင့် ထပ်မံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်သမိုင်း ပြတိုက်အား နှစ်ရှည်ငှားရမ်း၍ စီးပွားဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို့ Yangon Technical and Trading Co.,Ltd မှ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပြီး ကျပ်သန်းပေါင်း ၇၄၀၀၀ ကျော် မြှုပ်နှံကာ လုပ်ကိုင်မည့် စီမံကိန်းအား MIC သို့ တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
Yangon Technical and Trading Co.,Ltd မှာ ၀ိတိုရိယဆေးရုံ၏ အဓိကပိုင်ရှင်၊ နာမည်ကျော် လူငယ်လုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်ဝင်းရှိန် ပိုင်ဆိုင်သည့် ဧရာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီအုပ်စု အောက်တွင်ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ''စစ်ရုံးဟောင်းကိုတော့ ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီက လုပ်ကိုင်ဖို့ MIC ကိုတင်ထားတယ်။ ခွင့်ပြုမိန့် မရသေးဘူး။ ကမ္ဘောဇကတော့ ခုထိ စီမံကိန်းကို MIC တင်ပြထားတာ မရှိသေးဘူး။ စစ်သမိုင်း ပြတိုက်ကိုတော့ ကျပ်သန်းပေါင်း ၇၄၀၀၀ ကျော် မြှုပ်နှံပြီး လုပ်ကိုင်မယ်လို့Yangon Technical and Trading Co.,Ltd က တင်ပြထားပြီးပြီ'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၇၀၀၀ ကျော်အထိ မြှုပ်နှံမည့် အစီအစဉ်အား MIC သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီ အနေဖြင့်မူ မေ ၉ ရက် အထိ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သို့ တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ကမ္ဘောဇ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ''ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တောင် မတင်ရသေးပါဘူး။ ကမ္ဘောဇအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အခြားကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု အမည်နဲ့ လုပ်ကိုင်တာပါ'' ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
NLD ကို မဲပေးမယ်
ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရေး စောနေသေးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရေး ဆွေးနွေးရန် စောနေသေးဟု NLD ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
Created on Saturday, 11 May 2013 01:22
NLD အနေဖြင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရေး ဆွေးနွေးရန် စောနေသေးဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။
မေ ၈ ရက် ညနေပိုင်းက လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ (RFA) သတင်းဌာန၏ ဒီမိုကရေစီ ခရီးကြမ်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်တွင် အဆိုပါ သတင်းဌာန၏ မေးမြန်းမှုအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မေ ၄ ရက်က ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်၏ ဒေသဆိုင်ရာ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ခင်က လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင်NLD ပါတီအနေဖြင့် အမတ်နေရာ အများစု အနိုင်ရနိုင်ပြီး ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ဦးတည်သွားမည့် သဘောထား ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်ခင်၏ ပြောကြားမှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ရာ ''ယင်းသို့ ပြောကြားချက်သည် ပြောကြားသူ၏ သဘောထား အမြင်မျှသာဖြစ်ကြောင်း၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့၏ တရားဝင် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ယောက်အနေဖြင့် ယင်းအကြောင်းအရာအား ဆွေးနွေးရန် စောနေသေးကြောင်း'' ပြောကြားခဲ့သည်ဟု RFA သတင်းဌာနတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ်နေရာ ၄၄ နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ၄၃ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည့်အပြင် လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း အမတ်နေရာ အများစုတွင် အနိုင်ရရှိမည်ဟု ရေပန်းစားလျက်ရှိသည်။
၂၀၁၅ မတိုင်ခင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားထံ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ...
စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးအား ဦးဇော်ဝင်းရှိန်၏ ကုမ္ပဏီတို့က...
ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရေး စောနေသေးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...